idili: ukuvulwa kwe-samsung galaxy s7 ne-s7 edge manje kushibhile ekuthengeni okungcono kakhulu
none Izindaba Nokubuyekezwa Idili: Umngcele ovuliwe we-Samsung Galaxy S7 ne-S7 manje ushibhile ku-Best Buy
Idili: Umngcele ovuliwe we-Samsung Galaxy S7 ne-S7 manje ushibhile ku-Best Buy
Uma kwenzeka ungafuni ukulinda kuze kube yilapho i-Best Buy isiqalisa Ukuthengiswa kweBlack Friday , kufanele wazi ukuthi umthengisi usevele unikeza izaphulelo onqenqemeni lwe-Samsung Galaxy S7 ne-Galaxy S7.
Njengamanje, iBest Buy ikuvumela ukuthi uthenge i-Galaxy S7 ngo- $ 549.99 (leyo & apos; s $ 120 isuswe entengo yoqobo), kanye nonqenqema lwe-Galaxy S7 ngo- $ 669.99 ($ ​​100 kususwe entengo yokuqala). Lezi yizinhlobo ezisemthethweni ezingavuliwe zase-US eziphathwayo, futhi ziyahambisana nazo zonke izinkampani ezinkulu zenethiwekhi: iVerizon, i-AT & T, iT-Mobile, ne-Sprint. I-S7 itholakala ngombala omnyama negolide, kanti umphetho we-S7 uza ngesiliva negolide.
I-Best Buy ihlinzeka ngeShaja yamahhala engenantambo ye-Samsung Fast Charge (evamise ukubiza u- $ 59) nge-Galaxy S7. Ngeshwa, abathengi be-Galaxy S7 onqenqemeni abayitholi ishaja yamahhala. Bona izixhumanisi zomthombo ezingezansi ukuthola imininingwane ephelele.
Kukhishwe ngoMashi (ekuqaleni kuphela ngabathwali), i-Samsung Galaxy S7 ne-Galaxy S7 onqenqemeni bahlala izingcingo ezimbili ezinamandla nezinesifiso esikhulu se-Android nxazonke. Uma ungakakwenzi lokho, ungathola okuningi ngama-handsets ngokubheka okwethu Ukubuyekezwa kwe-Galaxy S7 kanye neyethu Ukubuyekezwa komphetho we-Galaxy S7 .
Unqenqema lwe-Samsung Galaxy S7
umthombo: Best Buy ( I-Galaxy S7 , Umngcele we-Galaxy S7 ) nge I-Droid-life
pes 2017 pro kwemvelo ibhola le-android
yini eyodwa thatha i-samsung
Ngabe i-AT & T & apos; s MicroCell ingadonsa impilo yebhethri kuma-handset?
Imidlalo yokudubula esebenzisa i-iPhone & apos; s 3D Touch ngokuphelele
I-AT & T yethula iSaver Stream, inciphisa ividiyo ye-HD ibe yincazelo ejwayelekile yokonga kudatha
Ukuhlukahluka kweJMeter Pass Phakathi Kwamaqembu Wentambo
AbakwaSamsung kanye ne-LG babuye baqinisekise ukuthi abazinciphisi izingcingo ezinamabhethri amadala
Okufanele ukwenze lapho ifoni yakho iba manzi
Izingcingo ezihamba phambili ezingabizi izingane zakho
Izinhlelo Zokusebenza Zilungiselelwe: Amathiphu we-Facebook Messenger namasu we-iOS ne-Android